Global Voices teny Malagasy » Maxima Zorreguieta, Ilay Arzantina Ho Lasa Mpanjakavavy Hitondra An’i Nederlandy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Febroary 2013 11:15 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Schneider Nandika (en) i Gabriela García Calderón, zhhantar
Sokajy: Arzantina, Holandy, Mediam-bahoaka, Tantara
Nanjarylohahevitra novoizina be tamin'ny tambajotra Twitter ny tenifotra Máxima Zorreguieta  [es] hatramin'ny nandrenesana ny vaovaon'ny Mpanjaka Beatrix any Nederlandy  izay niala tamin'ny fitondrany. Máxima, teraka tany Arzantina, ary nanambady ny Printsy Willian Alexander, Printsin’ i Orange-Nassau , no mety ho lasa Mpanjakavavin'i Nederlandy.
Sary nalain'i Holger Motzkau , nalaina tamin'ny Wikimedia Commons niaraka tamin'ny fahazoan-dalana .
Naneho hevitra avy hatrany ireo Arzantina mpampiasa twitter, toa an'i Juan Cruz Maldonado (@Chankra_Lad ), izay nibitsika  [es] hoe:
@Chankra_Lad  [es]: Ho lasa Mpanjakavavin'i Nederlandy i Máxima Zorreguieta. Tena mampiavaka an'i Arzantina mihitsy izany, ny Arzantina ihany no manolo toerana ny Arzantina.
Manoratra  [es] i Darío Silva D'Andrea (@DariusBaires ), mavitrika amin'ny resaka fitondrana ampanjaka sy ny tantarany, araka ny mombamomba azy ao amin'ny Twitter :
@DariusBaires  [es]: Miala ny mpanjaka Holandey; maty ny mpanjaka Anglisy, ny mpanjaka Espaniola… zareo ireto kosa noroahana.
Tsy te-ho tara tsy hahatratra ny Fanomezana Fehiloha i Federico Croce (@FedericoCroce ) ary mibitsika fa te ho any izy. Na izany aza, tsy resy lahatra ireo Arzantina hafa mpampiasa Twitter ka misafidy ny tsy hankalaza ny fanosorana vaovao an'i Maxima, toa an'i Mathias Carnaghi (@MathiasCarnaghi ), izay manoratra  [es] hoe:
@MathiasCarnaghi : Mitovy amin'ny fanohanana ny fitondrana ampanjaka maneran-tany ihany ny fankalazana ny mahalasa an'i Maxima Zorreguieta ho mpanjakavavy. Ajanony ny hakamoana sy ny fandaniana ny volam-bahoaka!
Nanjary lasa fironana teo an-toerana ihany koa ny tenifotora #Holanda  [Netherlands].
Tsy tokony ho nisy akory ny mariazin'i William sy i Maxima noho ny andraikitra voalohany notanan'ny rain-drazazavavy tao anaty fitondrana jadona miaramila Arzantina. Manoratra mikasika izany  [es] ny bilaogy Comer Viajar Amar  [es]:
Tamin'ny 1999, nahatonga ny Printsy ho endrika malaza, ny mariazy nifamatoran'i Maxima sy ny fofombadiny, izay saika nahakivy noho ny lasan'ny rain-drazazavavy.
Natao mariazy tamin'ny 2002 tany Nieuw Kerk tany Amsterdam i Guillermo y Máxima, ny mpanjaka mivady  [es]. Tsy afaka nanatrika ny rainy noho ny fandavana nataon'ny kilasy politika Holandey noho ny fananany toerana hitam-bahoaka nandritra ny fitondrana jadona miaramila Arzantina (1976-1983), fony izy Sekreteran'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana.
Nahazo ny fon'ny vahoaka Holandey i Máxima, ary amin'ny 30 Aprily 2013 no andrasana hanao ny fianianana maha-mpanjaka azy ny ho Mpanjaka vaovaon'i Nederlandy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/02/23/45370/
 Máxima Zorreguieta: https://twitter.com/search?q=%22M%C3%A1xima+Zorreguieta%22&src=tren
 Mpanjaka Beatrix any Nederlandy: http://en.wikipedia.org/wiki/Beatrix_of_the_Netherlands
 Willian Alexander, Printsin’ i Orange-Nassau: http://en.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander,_Prince_of_Orange
 niaraka tamin'ny fahazoan-dalana: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Wedding_Stockholm_2010-Konserthuset-405.jpg
 mikasika izany: http://comerviajaramar.wordpress.com/2013/01/28/el-futuro-rey-de-holanda-tendra-reina-argentina/